Njem nlegharị anya na nkwupụta Glasgow na mgbanwe ihu igwe Ndị egwu ọhụrụ nwere ike karịrị UNWTO ma ọ bụ WTTC
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Sustainability News » Njem nlegharị anya na nkwupụta Glasgow na mgbanwe ihu igwe Ndị egwu ọhụrụ nwere ike karịrị UNWTO ma ọ bụ WTTC
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • investments • nzukọ • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Akụkọ na -agbasa na Spain • Sustainability News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa
Ọ bụ ezie na ndị otu Spain na Saudi ọhụrụ duru ndị njem na njem nlegharị anya chọrọ ihe omume abụghị nkwupụta, abịanyere aka na nkwupụta Glasgow na Climate Action n'izu a.
Ihe karịrị ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya 300 edebanyela aha na nkwupụta Glasgow na Climate Action n'izu a, nke ghọtara mkpa ọ dị ngwa ngwa maka atụmatụ zuru ụwa ọnụ na-agbanwe agbanwe maka omume ihu igwe na njem nlegharị anya.
Ọ bụ ezie na igwe mgbasa ozi UNWTO nọ na-atụ anya ịtụgharị ihe omume mgbanwe ihu igwe a ka ọ bụrụ nkwado WTTC iji kwado onye odeakwụkwọ ukwu ya maka usoro nkwenye ntuli aka na-abịanụ ma emechaa n'ọnwa a, WTTC mere ka o doo anya na ọ naghị akwado onye ọ bụla.
Otú ọ dị, ụwa nke njem nlegharị anya dị n'otu ma a bịa na mgbanwe ihu igwe. Ụfọdụ na-eweta nkwupụta, ndị ọzọ na-elekwasị anya na omume ka njọ, mana mgbanwe ihu igwe bụ ugbu a na-elekwasị anya na mmalite ọhụrụ nke njem na njem nlegharị anya na na mgbe COVID-19 gasịrị.
Dị ka nkwupụta natara site na eTurboNews site na the World Travel and Tourism Council, WTTC, Nkwupụta Glasgow bụ atụmatụ nke otu jikọrọ aka gụnyere UNEP, Nkwuwapụta njem nlegharị anya, Travel Foundation na UNFCCC kwadoro.
Ọ bụghị naanị UNWTO na-edu, dịka nkwupụta WTTC a si kwuo.
WTTC nwere mmekọrịta siri ike na ọtụtụ òtù UN gụnyere nke dị n'elu, gbakwunyere, anyị nwere mkpebi siri ike maka mgbanwe ihu igwe na ndị otu anyị chọrọ igosi onye ndu site n'ịkwado ebumnuche nke nkwupụta ahụ n'oge dị oke mkpa.
Ọtụtụ ndị òtù WTTC dị ka Accor, Iberostar, na ndị ọzọ bịanyere aka n'akwụkwọ nkwupụta ahụ, ya mere ọ dị mkpa ka WTTC tinye olu ya iji kwado ọchịchọ ahụ n'ebe efu efu na ntinye aka ịkwado ndị òtù ya ịzụlite atụmatụ Climate Action Plan.
Otú ọ dị, nkwado WTTC kwupụtara na Mgbakọ Glasgow enweghị ihe jikọrọ ya na ntuli aka odeakwụkwọ UNWTO ma ọ bụ usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ bụla, dịka a sụgharịrị ya na ụfọdụ okwu ndị a hụrụ na mgbasa ozi mgbasa ozi na nso UNWTO.
Dị ka mgbasa ozi mgbasa ozi na-ahụ na saịtị UNWTO si kwuo, nkwupụta Glasgow sitere na mmekorita nke UNWTO, United Nations Environment Programme (UNEP), gaa Scotland, Travel Foundation, na Tourism Declare a Climate Emergency, n'ime usoro nke Otu Mmemme Njem Nleta Sustainable Planet kwadoro n'ịkwalite usoro oriri na mmepụta ihe na-adigide.
The Ụlọ ọrụ njem nlegharị anya chọrọ ịbụ akụkụ nke ngwọta maka mgbanwe ihu igwe dị ize ndụ, Minista njem nlegharị anya Saudi kwuru, na-ekwu okwu na njikọ aka njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ nke Saudi Arabia na Spain na-eduzi na mbido izu a na Glasgow.
Otú ọ dị, UNWTO esoghị na Saudi na Spen a na-eduzi atụmatụ ndị dị ike na gọọmentị. Nkwa ahụ na mbido ahụ bụ omume, ọ bụghị naanị mkpebi.
Na mgbakwunye na Ọdịnihu Nzuzo Nzuzo (FII) mechiri na Saudi Arabia, nsonaazụ ya bụ nkwekọrịta Saudi Arabia na Spain ijikọ ndị agha imegharị njem nlegharị anya post-COVID gụnyere site na UNWTO.
November 7, 2021 na 00: 12
Ị gbagharala ma kọwapụta isi okwu nke Nkwupụta Glasgow. Ọ bụ ihe niile gbasara omume. Ndị nkwuwapụta na-agba mbọ ibelata ikuku carbon site na 50% site na 2030 ma ga-emepụta atụmatụ mmemme n'ime ọnwa 12 nke mbinye aka, wee na-akọ kwa afọ maka ọganihu ha.